Sturridge Oo Dhaawac Gaadhay Ku Maqnaan Doona muddo bil ah
HomeWararka MaantaSturridge Oo Dhaawac Gaadhay Ku Maqnaan Doona muddo bil ah
Weeraryahanka kooxda Liverpool ee Daniel Sturridge ayaa garoomada ka maqnaan doona ugu yaraan muddo afar toddobaad ah kadib markii uu muruqa bawdada ka gaadhay dhaawac kulankii Manchester United ay 2-1 ku garaacday kooxdiisa ee garoonka Anfield.
Weeraryahankan ayaa laga saaray liiska xulka qaranka England kadib markii baadhitaano lagu sameeyey ay muujiyeen in dhaawaciisu ka culus yahay sidii markii hore la moodayey, taas daraadeedna ay suurtogal tahay in kooxdiisa uu ka maqnaado muddo ka badan hal bil.
Dhaawacan ayaa walaac hor leh u keenaya kooxda Liverpool oo sidoo kale ay ganaaxyo min saddex ciyaarood ah ku maqnaan doonaan Steven Gerrard iyo Skrtel, kuwaas oo lagu ganaaxay dhaqan xumo ay sameeyeen kulankii Manchester United.
Raheem Sterling ayaa isagana laga daweynayaa dhaawac fudud oo soo gaadhay halkaas iyadoo sidoo kale ay wali kooxda dhakhaatiirtu gacanta ku hayaan Adam Lallana oo xanuun dareemaya.
Si kastaba ha ahaatee, Sturridge ayaa maqnaan doona kulanka muhiimka ah ee ay Liverpool ku qaabili doonto Arsenal kaas oo si ay u xaqiijiso in ay boos ka hesho Champions League sannadka dambe ay khasab ku tahay in ay garaacdo Arsenal.
Wenger Oo La Xaqiijiyey Inuu Ka Tegayo Arsenal Kaddib Guul-darradii Chelsea Iyo Caydii Taageereyaasha
05/02/2017 Abdiwahab Ahmed
Taageere Ku Dhintay Garoonka Celtic Park Ciyaartii Isreeb Reebka Euro 2016 Ee Scotland-Ireland
Cahdigii Guardiola Oo Bilawday: Manchester City Oo Soo Bandhigtay Tabbobareheeda Cusub